कस्तो अचम्म आफ्नै जग्गा बेचेर प्रेमीलाई जापान पठाए पछि यस्तो सम्म भयो ? हेर्नुहोस-Nepali online news portal
कस्तो अचम्म आफ्नै जग्गा बेचेर प्रेमीलाई जापान पठाए पछि यस्तो सम्म भयो ? हेर्नुहोस
सुनसरी । सुनसरी जिल्लाको धरान वडा नं. ११ मा बसोबास गर्दै आएकी मनिषा कुलुङ राई(नाम परिवर्तन) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफैले जापान पठाएकाे प्रेमीले धोका दिएकाे बताएकी छिन् । करिब २ बर्ष अघि धरानमा रहेको जग्गा बेचेर जापान पठाएका प्रेमीले धोका दिएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलन गराएकी हुन् ।
उनले २ वर्षहघि सँगै बसेर ‘म आएपछि तिमिलाई पनि जापान लान्छु र उतै हामी खुसी साट्दै घरजम गराैला’ भनेका प्रेमीले जापानबाट फर्के पछि अर्कै केटी बिहे गर्दा अाफु झसंग भएकाे बताइन् । उनले तबमात्र बुझिन् उनकाे प्रेमी भनाैदाेले धोका दिएको । उनले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त धाेकेबाज प्रेमीलार्इपक्राउ गरी अरु चेलीबेटीहरुको जिवनसँग खेलबाड हुन नदिन आग्रह समेत गरेकी छिन् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्तीको पुर्णपाठ :
मेरो नाम रोस्निका कुलुङ राई (नाम परिवर्तन) हो । म धरान १७ मा बसोबास गर्दै आइरहेकी छु । म एक पिडित महिला हुँ ।मैले न्यायका लागी प्रहरी प्रशासन सम्म पुगेर न्याय मागे तर अहिले सम्म भएगरेका प्रयासहरुले मलाई न्याय दिन सकेको छैन । प्रहरी प्रशासनमा पटक पटक छलफलहरु भए तर पनि छलफबाट पनि मैले न्याय पाउन सकिरहेकी छैन ।त्यसैले आज मैले राज्यको चौथो अङ्गसँग न्यायका लागी अनुरोध गर्न चाहन्छु र पत्रकारको कलमद्धारा म पिडित महिलाले न्याय पाउनका लागी सहयोग मिल्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । मैले अघि पनि सञ्चारकर्मी ज्युहरुलाई अवगत गराइसकेकी छु कि म एक पिडित महिला हुँ ।
मेरो ८ बर्ष अघि(२०६८) साल देखी धनकुटा आहालेका रोशन राई (विप्लब)सँग सामान्य चिनजान र लेनदेनको कारोबारले मायाप्रेम बस्यो । शुरुमा उसले मसँग ७००० ऋण मागेर लग्यो, त्यसपछि त्यहि ७००० रुपैँया नै हामी बिच माया प्रेमको माध्यम बन्यो । प्रेम बसेपछि सुरुका दिनमा धरान १७ स्थित मेरो कोठामा हामी दुवै जना सँगै बस्न थाल्यौ । हामी २०७१ सालदेखी अघोषित रुपमा सँगै श्रीमान् श्रीमतीका रुपमा बस्न थाल्यौँ । उ धरानमा आएर बस्थ्यो अनि प्रेम बसेपछि म आँफैले मेरो कोठामा राख्न थाले । उ बेरोजगारी अवस्था र पढ्ने भएकाले उसको अभावमा म आफैँले सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको थिएँ ।
उसले मसँग भएका पैसाहरु धेरै पटक आँफै झिकेर लाने गर्दथ्यो । म पनि आखिर श्रीमान् हो भनेर केही भन्ने गरेकी थिइँन । अहिले सम्म उसले मसँग भएको पैसा कति लग्यो भन्ने हेक्का समेत छैन । तर मैले उसको जिवनको लागी आफुसँग भएको सम्पुर्ण जायजेथा सकिसकेकी छु । उसको भविष्यको लागी उसलाई जापान पठाउनका लागी मैले अहिले २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छु । २ बर्ष अघि मात्र उ जापान गएको हो । जापान पठाउनका लागी म आफैँ काठमाडौं सम्म छाड्न समेत गएकी थएँ ।
मैले उसलाई धरान ११ मंगलबारेमा रहेको ९ धुर जग्गा बेचेर जापान पठाएकी थिएँ । उसको लागी भनेर यसअघि पनि धनकुटामा लाहुरे ट्रेनिङ खोल्न भनेर पैसा दिएँ । आफ्नै श्रीमान् हो पैसा दिँदा के भयो र भन्ने मलाई लाग्थ्यो । अनि उसले पनि मलाई बिहे गर्छु भनेर विस्वास जितेको थियो । तर अहिले आएर त्यो विश्वास तोडेर मलाई घरको न घाटको बनाएको छ । उ जापानबाट आएर मलाई बिहे गर्ने र जापान लैजाने सम्मको आश्वासन दिएको थियो । तर जापानबाट आएर मसँग कुनै सम्पर्क नै गरेन । उसले भखरै मलाई छाडेर विबाह गरेको छ । मेरो जिवनलाई ववार्द बनायो ।
त्यसैले आज म यो पत्रकार सम्मेलन गर्न वाध्य भएको छु । सञ्चारकर्मी ज्युहरुलाई हामी सधैँ श्रीमान श्रीमतिको रुपमानै बसेको हौँ । हाम्रो प्रेमको निशानी समेत भएको थियो ।५ महिनाको गर्भ विभिन्न वाहाना बनाएर गर्भपतन गराउन बाध्य बनायो । म सँग हाम्रो मायाको निशानीको फोटो समेत रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु । आज म सो व्यीक्तबाट अत्यान्तै पीडित बनेको छु । जस्का लागी मैले सर्वस्व सुीम्पएकी छु । तर उस्ले आज धोका दिएका छ । मेरो सबै सम्पति समेत उसकै लागि भनेर मैले सके । मले न्याय पाउन सकिन । प्रहरी प्रशासन सम्म पुगेर दोहोरो छलफल समेत भए पनि प्रमाण खोज्छ ।
तर म सँग प्रमाण छैन ।मैले उसलाइ विश्वासको आधारमा सबै कुरा दिएको हुँ । आज मैले प्रहरी प्रशाशनमा गएर न्याय माग्दा के प्रमाण छ भनेर उल्टै मलाई तनाव दिदँै आएका छन् ।जस कारणले आज मैले पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएकी हुँ । मेरो जिवन बवार्द त बनायो नै मैले उस्को लागी लगानी गरेको २० लाखको समेत डुबेको छ । मैले २० लाख रुपैँया सहित आफुलाई परेको अन्यायको न्याय पाउ भनि इलाका प्रहरी कार्यलय धरानमा पनि उजुरी दिए तर प्रहरीले उजरी लिन मानेनर जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरी पठायो । त्याहाबाट पनि मैले उचित न्याय पाउन सकेको छैन । उसको वैंक खाता कृषि विकाश वैंकमा खाता बनाउदा मलाई श्रीमति भनेर उल्लेख गरेको छ । भने ५ महिनाको बच्चा गर्भपतन गराउँदा समेत मेरो श्रीमती हो भनेर हस्ताक्षर गरेको समेत जानकारी गराउछु ।onlineallinfo.com